» यस्तो नदी जहाँ शुद्ध सुन बग्दछ !
यस्तो नदी जहाँ शुद्ध सुन बग्दछ !
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १२:१७
फागुन ११– नदी तथा खोलानालामा पानी बग्ने कुरा त सामान्य हो ।
तर दुनियाँमा एउटा यस्तो नदी पनि रहेछ जहाँको पानीमा सुन बग्दछ र त्यो सुन पनि शुद्ध हुन्छ । क्यानडाको डसन सिटीमा बोनान्जा क्रिक नामक एउटा यस्तो नदी छ जसमा शुद्ध सुन बग्दछ । सुन बग्ने उक्त नदीमा सधैभरी आगन्तुकको मेला लागिरहेको हुन्छ ।
मानिसहरु टाढा टाढाबाट त्यहाँ आउँछन् । उक्त नदीबाट निस्किने सुनले जो सुकैलाइ क्षणभरमै लखपति बनाइदिन सक्दछ ।
आखिर त्यो नदीमा कहाँबाट सुन आउँदछ त ?
सन् १८९६ मा जर्ज कर्मेक, डसन चार्ली र स्कुकम जिम मेसनले सबैभन्दा पहिले उक्त नदीमा सुन भएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । जब नदीमा सुन बगिरहेको खबर सार्वजनिक भयो, त्यहाँ मानिसहरुको भिड जम्मा भइहाल्यो ।
सन् १८९८ मा उक्त सहरको जनसंख्या केवल १५०० थियो । तर नदीमा सुन भएको पत्ता लागेसँगै सहरको जनसंख्या नाटकीय ढंगले बढ्न थाल्यो । रिपोर्टअनुसार उक्त नदीको सतहमुनिको जमिनमा सुन रहेको छ । नदीमा सुन खोज्न आउने मानिसहरुले बालुवा छानेर, बरफका टुक्राहरुमा टाँसिएको सुन छुट्टाएर शुद्ध सुन जम्मा गर्दछन् ।
उक्त नदीमा सुन खोज्नेहरु रातारात लखपति हुनेहरु पनि छन् । तर सधैभरी सुन भेटिनैपर्छ भन्ने छैन । कहिलेकाहीँ मानिसहरु रित्तो हात पनि फर्किन बाध्य हुन्छन् ।
झरना साहित्यिक परिवार मकवानपुरलाई एक लाख पुरस्कार
कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका हेटौंडाका भुजेल पक्राउ
मकवानपुरमा सामीद्वारा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी पराशर्म
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन तयार छौँ–माधव नेपाल
सरकारद्वारा विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन
सुनको मूल्य तोलामा १७ सय रुपैयाँ घट्यो
हेटौंडामा दारको ठेकीको संरचना निर्माण